Midowga Yurub oo canbaareeyay dilkii ku xigeenkii garyaqaanka guud ee Soomaaliya- calanka.com
Midowga Yurub oo canbaareeyay dilkii ku xigeenkii garyaqaanka guud ee Soomaaliya
U qeybsanaha siyaasada dibada iyo amaanka ee Midowga yurub haweeneyda lagu magacaabo Catherine Ashton ayaa muujisay sida weyn ee uu midowga yurub uga xun yahay dilkii dhawaan Muqdisho loogu geystay ku xigeenkii garyaqaanka guud ee Somaliya Axmed Sheekh Nuur oo kooxo hubeysan ku toogteen Muqdisho .
" aad ayaan u canbaareyneynaa weeraradaas oo kale kuwaasi oo dhab ahaantii dhabar jab ku ah hormarka Somaliya ay ku sii talaabsaneyso" sidaas waxa ay haweeneydaan ku tiri qoraal ka so baxay xafiiskeeda oo ku aadan dhacdadaas.
Catherine Ashton ayaa carabka ku adkeeysay in Midowga Yurub ka go`an tahay sii xoojinta gacan saarka ay lala leeyihiin dowlada Somaliya si sara loogu qaado amaanka ,nabad buuxdana loogu soo dabaalo dalkaas Somaliya .
Kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas`uuliyadda dilkaas iyadoo afhayeenka kooxdaas tilmaamay in ay sidoo kale bartilmaameysanayaan xubno kale oo xeer ilaalinta ku jira xilli dowlada dowlada Somaliya ay dadaal ugu jirto in dib u habeyn ay ku sameyso nidaamka xeer ilaalinta dalka . Calanka.com: Isha wararka xaqiiqda